Misy ireo mahare ny namany hianatra fitantanana ohatra dia roboka ihany na dia tsy izay aza no tena mety aminy. Hanampy ireny karazan’ankizy ireny ny sekoly ambony UPRIM, raha araka ny fanazavan-dRakotovaoarison Nadia, tompon’andraikitra voalohany ao aminy. Horaisin’izy ireo tsirairay ireo ankizy mpianatra hiditra hianatra ao aminy ka hazavaina amin’ireto farany ny asa tiany hatao rehefa lehibe sy ny lalam-piofanana tokony harahiny raha te ho tonga amin’ny tanjona tiana hokendrena izy ireny. Tsiahivina moa fa ho an’ny fampianarana mankany an-tsekoly isan’andro dia mbola azo idirana avokoa ireo lalam-piofanana misy ao amin’ny sekoly ambony UPRIM. Anisan’ireny ny gestion et management, ny commerce et marketing, ny communication, ny droit ary ny paramédicaux izay manofana mpampivelona sy infirmiera. Nisafidy ny tsy hampiakatra saram-pianarana izy ireo amin’ity taom-pianarana vaovao ity noho ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny.
Legende : Rakotovaoarison Nadia, tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny sekoly ambony UPRIM